Sida loo abuuro saamaynta "Andy Warhol" | Abuurista khadka tooska ah
Naqshadayntu waxay ku lug leedahay xiisaha badan, taas oo ah, in badan oo ka mid ah dadka go'aansada inay galaan hawshan badiyaa waxaa soo jiita saameyn gaar ah, taas oo, xaaladaha badankood, ay u egtahay inay keento tiro badan oo xirfadlayaal naqshadeyn ah.
Si kastaba ha noqotee, tani kama reebayso kiisaskaas naqshadeynta garaafka lagu baran lahaa iyadoo lagu saleynayo tilmaamaha tacliimeed ee ugu macquulsan, iyo in badan, in badan oo ka mid ah naqshadeeyayaasha garaafyada Waxay ku gali lahaayeen edbintan adoo raacaya casharro iyo tilmaamo ku saabsan shabakadda.
Soo jeedinno badan oo aan heli karno, naqshadeynta waxaa badanaa lala xiriiriyaa kooxo ku xiran isbeddellada qaarkood marka la eego kooda mood iyo qaab waxaa loola jeedaa, isagoo tusaale u ah tan farshaxanka magaalooyinka, oo iftiiminaya faahfaahinta waraaqaha iyo naqshadaha magaalooyinka.
Waxaan sidoo kale ka hadli karnaa rinjiyeyaasha dijitaalka ahKuwa u adeegsada aaladaha naqshadeynta samaynta moodooyinkooda iyo shaqadooda, shaqo ugu dambayntii u qalanta samir iyo u-hurnaan. Laakiin marka la soo koobo, naqshadeynta waa edbin ku raaxeysata dhammaan noocyada waxqabadka, oo muujinaya nooc kasta dhaqamada iyo isbeddellada, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah shaqooyinka ugu dhammaystiran illaa inta ay ka kooban tahay guildheeda.
Maanta waxaan soo bandhigeynaa cashar kuu ogolaanaya inaad abuurto Saamaynta "Andy Warhol", waa kuwan tallaabooyinka lagu abuurayo:
Marka hore, waxaan xulnaa sawirka aan dooneyno in aan wax ka qabanno ku saabsan saameynteena.
Kadib waxaan adeegsanaa qalabka qalinka oo aan jarjarnaa asalka.
Hadda oo aan hayno sawirka bilaa asalka ah, waxaan aadeynaa Sawirka - Ballaaran oo jiirka ayaan u dhaqaaqeynaa illaa aan ka helno natiijada aan jecel nahay. Waxaa habboon in lagu ogeysiiyo in Qiimaha 127 waxay noqon kartaa bar wanaagsan oo tixraac ah.
Waxaan nuqul ka sameysaneynaa lakabka saamaynta marinka iyo thumbnail-ka muujiya sawirka, halka aan ku dhejin doonno CTRL.
Qalabka baaldi rinji, Waan rinjiyeyn karnaa xulashada oo dhan si ay u caddaato.
Kadib waxaan codsanaa shaandho, taas awgeed, waxaan u gudubnaa Liiska - Filter - Farshaxan.
Waxaan u beddeleynaa lakabka Madoow.
Hadda waa inaan midabeynaa shaqadeena iyo tan, dhagsii thumbnail inta aan qabanayno furaha Ctrl, kaas oo loo sameeyay si loo soo ceshado xulitaankii aan horay u sameyn lahayn.
Waxaan abuureynaa lakab cusub Menu - Lakabka - Cusub - Lakabka. Waxaan hoos uga dhigeynaa asalka, wixii ka dambeeya dooro midabka aan jecel nahay. Qalabka dheriga rinjiga waxaan ku buuxin doonnaa lakabka cusub.
Haddii aan rabno inaan abuurno qaab Warhol ah, waxay ku filnaan doontaa in lagu celiyo hawshan leh midabyo kale, sidaasna ku dhalinaya saamaynta la rabo.
Way yara adkaan kartaa in la gaaro, hase yeeshe, hanaanku wuu fududaan doonaa maadaama aan ku sii jirno ficil ahaan, tan iyo markii saamaynta warhol Ma ahan sida adag sida ay u muuqato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Sida loo abuuro saamaynta "Andy Warhol"